Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment चिउँडो हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कुन युवती कति भाग्यमानी ? - Pnpkhabar.com
चिउँडो हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कुन युवती कति भाग्यमानी ?
एजेन्सी : मानिसको अनुहारमा भएका हरेक अंगको आफ्नै महत्व छ । खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्र शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् । त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो । मानिसका स्वभाव, गुण अवगुण थाहा पाउन उसको चिउँडो हेरे पुग्ने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ । थाहा पाउनुस् कस्तो चिउँडोको अर्थ के ?
यदि कसैको चिउँडो गोलो आकारको छ भने यस्ता ब्यक्ति भावुक हुने र साना साना कुरामा पनि भड्किने हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले हरेक काम हतारमा गर्छन् र काम बिगार्छन् पनि । आफूलाई क्रोधी देखाउने यिनीहरुको स्वभाव हुन्छ । क्रोधको समयमा उत्तेजित भएर असंयमित काम समेत गर्छन् । यस्त ब्यक्तिहरु आफ्नो कुरामा अडिग हुन्छन् र स्पष्ट कुरा गर्छन् ।
जुन ब्यक्तिको चिउँडो लाम्चो आकारको हुन्छ त्यस्ता ब्यक्तिमा धेरै गुण हुन्छन् । यस्ता ब्यक्ति स्थिर स्वभावका हुन्छन् एउटा काम थालेपछि त्यसलाई पूरा गर्छन् । काम पूरा नगरी थकाइ नमार्ने यिनीहरुको चलन हुन्छ ।
सानो चिउँडो भएका ब्यक्ति आल्छी र असन्तोषी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्ति समस्याबाट भाग्छन् । यिनीहरुको महत्वाकांक्षा हुँदैन । कामचोर र ठग स्वभाव हुन्छ ।
कपिलवस्तुमा नर्ससहित ११ जना घर फर्किए